ကောင်:ကြသေး၇ဲ့လားအ၇ပ်ကတို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကောင်:ကြသေး၇ဲ့လားအ၇ပ်ကတို့
Posted by kokothandar on Aug 11, 2011 in Critic | 11 comments
ဇုံကားတွေထုတ်ခွင့်ပြုပြီး အမည်ပေါက်ကိုဝယ်ခွန်ဆောင်ခိုင်းပြီး လိုငိစငိချပေးတယ် တကယ်တော့ ဒီကားတွေ၇ဲ့ရှစ်ဆယ်ငါး၇ာနှုန်းစက်ပစ္စည်းတွေဟာနိုငိငံခြားကဟာတွေပါ။နောက်နှစ်လိုင်စင်ဝငိတော့RTဆိုပြီးက.ည.နကလူတွေဝိုင်ညှစ်ကြတာ Townace pickup တစ်စီးကိုရှစ်သိန်းခွဲလောက်ကူန်တယ်
မှာသိန်းပေါင်းသောင်းချီချမ်းသာနေပြီဆိုဘဲ ခုတော့ကြား၇ပြန်ပြီ RTထုမပေးဘဲလိုငိစင်တောင်ပေးမ၀င်ဆိုပြန်ပြီဲ ကားကောင်းမစီးနိုင်လို့ဇုံကားလေးဝယ်မိတာ ၀ယ်ခွန်ကပေးပြီးနောက်တနှစ်ကျတော့လိုင်စငိအ၀င်မခံ ဒါဆို၇င်အစကဘာလို့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလဲတ၇ားမှုနဲ့ စာနာမှုလေးတော့ထားကြပါအုံး တစ်ယောက်လာတစ်မျိုးမူတွေပြင်နဲပြည်သူတွေကတော့ခံ၇တဲ့ဘက်ကချည့်ပါဘဲ
ဘယ်ကကားမှဝယ်မစီးနိုင်လို့ တော်ပါသေးတယ်။အင်း ခပ်မြင့်မြင့်ဘဲစီးချင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာက သူများနိုင်ငံမှာလွှင့်ပစ်တဲ့ကားဈေးကောင်းပေးဝယ်နေရတော့လဲ ဘယ်ခါများကောင်းကောင်းစီးရပေါ့မလဲ
အကောင်းဆုံးက တက္ကစီကို စီး
ကြိုက်တဲ့ကား လက်တားစီးလို့ ရတယ်
သွားချင်တဲ့နေရာရောက်ရင် ကားအခိုးခံရမှာ မပူရဘူး
ထည်လဲ စီးလို့ရတယ် (၀ယ်မစီးနိုင်လို့ ပြောတာနော်)
Ferrari တစ်စီးလောက် ၀ယ်စီးမလား စဉ်းစားတာ… (တကယ်က မ၀ယ်နိုင်လို့ ) ဒီကလမ်းတွေကြောင့် မ၀ယ်ဖြစ်တော့ပါဘူး…
လောလောဆယ် အကုန်အကျအနည်းဆုံး ဘတ်စ်ကားပဲစီးနေတယ်
ခုနောက်ပိုင်း စက်မှုဇုန်ကထုတ်တဲ့ ကားလေးတော့ လိုချင်သား
အပြင်ပေါက်ဈေးက မတန်တဆမို့ (မ၀ယ်နိုင်ဘူး)
ဟုတ်ပနော်။ကားဝယ်စီးမလားလို့ ပါ လမ်းကဖျက်နေလို့ ဟိ ဟိ။ဘက်စ်ကားတိုးစီးရတာဘဲစိတ်ချမ်းသာတယ်။ဘယ်သွား ၂၀၀ ဘဲ။အေးဆေး။တက္ကစီ စီးတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် စိတ်မညစ်ရတော့ဘူး။ညစ်ညမ်းကားတွေဖွင့်ပြတဲ့ ကားသမားနှာဘူးတွေ နာဖို့ သာပြင်တော့။အေးဆေးစီးရမလားလို့ ငှားစီးမယ် ကြံတယ်။သူ တို့ ကတမှောင့်
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် …
ကားကောင်းရမယ် ဈေးလည်း မဆိုးရဘူး
ဖော်လံဖားလုပ်ရင်လုပ် မလုပ်ချင်ရင် လူထုအတွက်ဆို သံကုန်ဟစ် ပြီးရင် မအော်အောင် လာဘ်ထိုးရင် ငြိမ်ယူလိုက် … ကားပါမစ် ဘာပါမစ် ညာပါမစ် ဒါတွေ အကုန်ရမယ် …
အဲဒါတွေ မလုပ်ချင်ရင်တော့ ဘုရားတရားတလို့ လိုင်းကားသာတိုးစီးပေတော့
ဒီနှစ် ဇုံထုတ်ကားတွေ အရမ်းရစ် ဆိုပဲ.. သူငယ်ချင်းလည်း ဘာမှ မဟုတ်ပဲ အချိန်တွေကုန်ပြီး တာမွေမှာ ဟိုဟာ ဖြုတ်တပ် ဒီဟာ ဖြုတ်တပ် လုပ်ပြီး ပြန်သွားဝင်ရတယ်တဲ့.. ပိုက်ဆံလည်း တော်တော် ထွက်သွားတယ်တဲ့။
ကောင်းပါတယ်….။ ကိုယ်မှ ကိုယ်ပိုင်ဝယ်မစီးနိုင်တာ…။ စီးနိုင်ရင်တော့ မကောင်းဘူးပြောမှာပေါ့နော်…… ဟုတ်ဖူးလား…….။
Uncle gyi1974, Are you male or female? Your comment makes me confuse me.(Honestly)
အော်တဲ့သူကတာအော်နေတာ ၀ယ်တဲ့လူတွေကလဲ ၀ယ်နေတာပါဘဲ။